25 Ebreham wee lụọ nwaanyị ọzọ, aha ya bụ Ketura.+ 2 Ka oge na-aga, ọ mụụrụ ya Zimran na Jọkshan na Midan na Midian+ na Ishbak na Shua.+ 3 Jọkshan wee mụọ Shiba+ na Didan.+ Ụmụ Didan wee bụrụ Ashurim na Letushim na Leumim. 4 Ụmụ Midian bụ Ifa+ na Ife na Henọk na Abaịda na Eldea.+ Ndị a niile bụ ụmụ Ketura. 5 E mesịa, Ebreham nyere Aịzik ihe niile o nwere,+ 6 ma ụmụ ndị iko Ebreham mụụrụ ya, Ebreham nyere ha onyinye.+ O wee zipụ ha, mgbe ya onwe ya ka nọ ndụ, ka ha pụọ n’ebe Aịzik nọ+ gaa n’ebe ọwụwa anyanwụ, n’ala Ebe Ọwụwa Anyanwụ.+ 7 Afọ ole Ebreham dịrị ndụ bụ otu narị afọ na iri asaa na ise. 8 Ebreham wee kubie ume nwụọ n’ezigbo agadi, ọ kara nká ma nwee afọ ojuju, e wee lie ya dị ka e liri ndị ya.+ 9 Aịzik na Ishmel ụmụ ya wee lie ya n’ọgba Mak-pila nke dị n’ala Ifrọn nwa Zoha onye Het, nke dị n’ihu Mamri,+ 10 bụ́ ala Ebreham zụrụ ụmụ Het. N’ebe ahụ ka e liri Ebreham na Sera nwunye ya.+ 11 O wee ruo mgbe Ebreham nwụsịrị na Chineke nọ na-agọzi Aịzik nwa ya,+ Aịzik bikwa nso na Bia-lehaị-rọị.+ 12 Nke a bụ akụkọ banyere Ishmel+ nwa Ebreham bụ́ onye Hega, bụ́ nwaanyị Ijipt nke na-ejere Sera ozi, mụụrụ Ebreham.+ 13 Ndị a bụ aha ụmụ Ishmel, n’aha n’aha, dị ka usoro ọmụmụ ezinụlọ ha si dị: Nebeyọt+ bụ́ ọkpara Ishmel, na Kida+ na Adbiel na Mibsam+ 14 na Mishma na Duma na Masa, 15 Hedad+ na Tima,+ Jitọ, Nefish na Kedema.+ 16 Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Ishmel, ndị a bụkwa aha ha dị ka èzí ha si dị nakwa dị ka ebe ha mara ụlọikwuu ndị a gbara ogige si dị:+ ndị isi iri na abụọ dị ka ebo ha si dị.+ 17 Nke a bụ afọ ole Ishmel dịrị ndụ, otu narị afọ na iri atọ na asaa. O wee kubie ume nwụọ, e wee lie ya dị ka e liri ndị ya.+ 18 Ha wee biri n’ụlọikwuu malite na Havila+ n’akụkụ Shọọ,+ bụ́ nke dị n’ihu Ijipt, ruo Asiria. N’ihu ụmụnne ya niile ka o bi.+ 19 Nke a bụ akụkọ banyere Aịzik nwa Ebreham.+ Ebreham mụrụ Aịzik. 20 Aịzik gbara afọ iri anọ mgbe ọ lụrụ Ribeka nwa Betuel+ onye Siria+ nke Padan-eram, bụ́ nwanne nwaanyị Leban onye Siria. 21 Aịzik wee na-arịọsi Jehova arịrịọ ike karịsịa maka nwunye ya,+ n’ihi na ọ bụ nwaanyị aga;+ Jehova wee nabata arịrịọ ya,+ Ribeka nwunye ya wee tụrụ ime. 22 Ụmụ o bu n’afọ wee malite ịgba mgba,+ nke mere na ọ sịrị: “Ọ bụrụ otú a ka ọ dị, gịnị medịrị m ji dịrị ndụ?” O wee gaa ịjụ Jehova ase.+ 23 Jehova wee sị ya: “Mba abụọ nọ gị n’afọ,+ mba abụọ ndị ga-esi n’afọ gị pụta ga-ekewa;+ otu mba ga-aka mba nke ọzọ ike,+ nke okenye ga-ejekwara nke nwata ozi.”+ 24 Oge ime ya wee zuo ka ọ mụọ nwa, ma, lee! ọ bụ ejima ka o bu n’afọ.+ 25 Nke mbụ wee pụta, ahụ́ ya dum na-acha ọbara ọbara ma dị ka uwe e ji ajị anụ mee;+ ha wee gụọ ya Isọ.+ 26 E mesịa, nwanne ya jidere Isọ aka n’ikiri ụkwụ wee pụta;+ o wee gụọ ya Jekọb.+ Aịzik gbara afọ iri isii mgbe Ribeka mụrụ ha. 27 Ụmụ okoro ahụ wee too, Isọ wee bụrụ nwoke maara otú e si achụ nta,+ nwoke na-aga n’ọhịa, ma Jekọb bụ nwoke na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta,+ onye bi n’ụlọikwuu.+ 28 Aịzik hụrụ Isọ n’anya, n’ihi na ọ na-egbutere ya anụ ọ na-ata, ma Ribeka hụrụ Jekọb n’anya.+ 29 Otu mgbe, Jekọb nọ na-esi ofe mgbe Isọ si n’ọhịa lọta, ike gwụrụ ya. 30 Isọ wee sị Jekọb: “Ngwa, biko, kunyetụ m ofe—ofe ahụ nke na-acha ọbara ọbara, n’ihi na ike gwụrụ m!” Ọ bụ ya mere e ji gụọ ya Idọm.+ 31 Jekọb wee sị: “Buru ụzọ resị m ọnọdụ gị dị ka ọkpara!”+ 32 Isọ wee gaa n’ihu ịsị: “Lee, m na-aga ịnwụ, olee uru ọnọdụ m dị ka ọkpara baara m?” 33 Jekọb kwukwara, sị: “Buru ụzọ ṅụọrọ m iyi!”+ O wee ṅụọrọ ya iyi wee resị Jekọb ọnọdụ ya dị ka ọkpara.+ 34 Jekọb wee nye Isọ achịcha ma kunye ya ofe lentil, o wee rie, ṅụọkwa.+ O wee bilie pụọ. Isọ wee leda ọnọdụ ya dị ka ọkpara anya.+